KARAZANA KARAZANA FILE HIBERFIL.SYS AO AMIN'NY WINDOWS 10, 8 SY 7 ARY NY FOMBA HANESORANA AZY - WINDOWS - 2019
What is the file hiberfil.sys in Windows 10, 8 and Windows 7 and how to remove it
Raha hitanao amin'ny alalan'ny fikarohana iray ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny mihevitra fa manana file hiberfil.sys amin'ny drive C amin'ny solosaina misy Windows 10, 8 na Windows 7 ianao, ary tsy fantatrao hoe inona ilay rakitra ary tsy voafafa izany. Ireo rehetra ireo, ary koa ny fombafomba hafa mifandraika amin'io rakitra io, dia horesahina ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ao anatin'ireo torolàlana dia hozahantsika ny antontan-taratasin'i hiberfil.sys sy ny antony ilàna azy, ny fomba hanesorana na hampihenana izany, mba hanafahana ny toerana misy ny efijery, na mety halefa any amin'ny disque hafa. Fampianarana iray miavaka amin'ny lohahevitra ho an'ny 10: Hibernation an'ny Windows 10.
Inona ny file hiberfil.sys?
Ahoana ny fomba hanesorana hiberfil.sys amin'ny Windows (sy ny vokatr'izany)
Fomba ahoana no hampihenana ny haben'ilay rakitra tahiry
Azonao atao ve ny manindrahindra ny file hiberfil.sys ho an'ny horonantsary hafa
Inona no atao hoe hiberfil.sys ary nahoana ianao no mila rakitra hibernation ao Windows?
Hiberfil.sys rakitra dia rakitra hibernation ampiasaina ao amin'ny Windows mba hitahiry ny data ary avy eo haingana dia haverina haingana amin'ny RAM izy rehefa mihodina ny ordinatera na ny solosaina.
Ny dikan-teny farany amin'ny Windows 7, 8 sy Windows 10 rafitra fiara dia manana safidy roa amin'ny fitantanana ny fahefana amin'ny alàlan'ny torimaso - ny iray dia fomba fandriam-pahalemana izay mampiasa ordinatera na solosaina miaraka amin'ny fihenan'ny herinaratra (fa mbola miasa) ary mety hiteraka avy hatrany ny fanjakana teo alohan 'ny nametrahanao azy hatory.
Ny fomba faharoa dia ny hibernation, izay anambaràn'i Windows tanteraka ny votoatin'ny RAM amin'ny sarimiaina mafy ary mamafa ny ordinatera. Amin'ny manaraka rehefa miverina ianao, ny rafitra dia tsy miala amin'ny scratch, fa ny votoatin'ilay rakitra dia entina. Noho izany, ny habetsahan'ny RAM ao amin'ny ordinatera na ny solosaina finday, ny habaka midadasika hiberfil.sys dia mitondra ny disk.
Ny fomba fiasa hibernation dia mampiasa ny file hiberfil.sys mba hamonjena ny toetr'andro amin'izao fotoana izao ny ordinatera na ny solosaina, ary satria izy io dia rakitra iray, dia tsy azonao atao ny manala azy amin'ny Windows amin'ny fampiasana ny fomba mahazatra, na dia mbola misy aza ny fahafahana manavotra dia mbola bebe kokoa izany.
Alefaso hiberfil.sys ny doka mafy
Mety tsy ho hitanao ity rakitra ity. Ny antony dia ny fihenan'ny alim-bolana efa tsy kilemaina, fa, azo inoana kokoa, satria tsy namela ny fampisehoana ny rakitra miafin'ny Windows sy ny fiarovana. Mitandrema tsara: safidy roa misongadina ao amin'ny mari-pamantarana ny karazana mpitarika, i.e. Ny famadihana ny rakitra miafina dia tsy ampy, koa tokony hamaha ny singa "afenina ny rakitra fitahirizana rakitra".
Ahoana ny fomba hanesorana hiberfil.sys amin'ny Windows 10, 8 sy Windows 7 amin'ny fanalana ny hibernation
Raha toa ka tsy mampiasa hibernation ao Windows ianao, dia azonao atao ny mamafa ny file hiberfil.sys amin'ny alàlan'ny fanesorana azy, ka ahafahana miditra amin'ny sehatr'ilay rafitra.
Ny fomba haingana indrindra hanakanana ny hiakan-drano any Windows dia ahitana dingana tsotra:
Raiso ny baikon'ny baiko amin'ny maha-administrateur azy (ahoana no fomba hanatanterahana ny baikon'ny baiko amin'ny maha mpitantana azy).
Ampidiro ny baiko
ary tsindrio ny Enter
Tsy hahita ny hafatra momba ny fahombiazan'ilay fandidiana ianao, fa ny alikaola dia tsy hisy kilema.
Rehefa avy namoaka ilay baiko, dia alefa ao amin'ny fiara C (tsy mila rindrambaiko matetika) ny rakitra hiberfil.sys (ary tsy ilaina ny famerenana famerenana), ary ny item Hibernation dia hanjavona ao amin'ny menokan'ny Start (Windows 7) na ny Shut Down (Windows 8 sy Windows 10).
Fanampiny fanampiny izay tokony hohadinin'ny mpampiasa ny Windows 10 sy 8.1: na dia tsy mampiasa hibernation aza ianao, ny rakitra hiberfil.sys dia tafiditra ao amin'ny endri-tsoratra "Quick Start", izay azo jerena amin'ny antsipiriany ao amin'ny lahatsoratra Quick Start of Windows 10. Matetika dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny haingana download dia tsy, fa raha manapa-kevitra ny hamerenana indray ny hibernation dia ampiasao ny fomba voalaza etsy ambony sy ny baikopowercfg -h on.
Ahoana no hanafoana ny fiotazana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy ny rejisitra
Ny fomba etsy ambony, na dia araka ny hevitro aza, ny haingana indrindra sy mahasoa indrindra, dia tsy ilay hany tokana. Safidy iray hafa ny manala ny hibernation ary manala ny tahiry hiberfil.sys amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso.
Mandehana any amin'ny Control Panel Windows 10, 8 na Windows 7 ary mifidiana "Power". Ao amin'ny fikandrana havia izay miseho, dia fidio ny "Mametaka ny tetezamita mankany amin'ny modely torimaso", avy eo - "Hanova ny fampiasana herinaratra." Sokafy ny "Sleep", ary avy eo - "Hibernation after." Ary asio "Never" na 0 (zero) minitra. Ampiharo ny fanovana nataonao.
Ary ny fomba farany hanesorana hiberfil.sys. Azo atao izany amin'ny alàlan'ny tonian-drakitra Windows. Tsy fantatro hoe nahoana izany no mety ilaina, nefa misy fomba toy izany.
Mandehana any amin'ny biraon'ny rejisitra HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Power
Valin'ny safidy HiberFileSizePercent ary HibernateEnabled mametraka ny zero, ary farito ny tonian-drakitra misokatra ary atsangano ny ordinatera.
Noho izany, raha tsy mampiasa ny fiandrasana foana ianao ao amin'ny Windows, dia azonao atao ny manala azy io ary mamela toerana malalaka eo amin'ny sarintany henjana. Angamba, raha omena vola maivana androany, tsy dia ilaina loatra izany, fa mety ho azo ampiasaina tsara.
Windows tsy mamela anao hamafa ny file hiberfil.sys, fa mampihena koa ny haben'ity rakitra ity mba tsy hamerenany ny angon-drakitra rehetra, fa ilaina ihany koa ny misorata sy manomboka haingana. Ny RAM bebe kokoa ao amin'ny solosainao, ny lehibe kokoa dia ny habetsahan'ny toerana malalaka eo amin'ny fizarazaran'ny rafitra.
Mba hampihenana ny haben'ny rakitra hibernation dia ataovy fotsiny ny baikon'ny baiko ho mpandrindra, midira ilay baiko
ary tsindrio ny Enter. Vantany vao vita ny baiko dia ho hitanao ny haben'io rakitra vaovao io ao anaty bytes.
Azonao atao ve ny mamindra ny file hiberfil.sys hibernation amin'ny rakitra hafa
Tsia, ny hiberfil.sys dia tsy azo alefa. Ny rakitra hibernation dia iray amin'ireo raki-drakitra ireo izay tsy azo alefa amin'ny rakitra afa-tsy ny fizarazaran'ny rafitra. Misy lahatsoratra mahaliana ao amin'ny Microsoft mikasika izany (amin'ny teny Anglisy) mitondra ny lohateny hoe "File System Paradox". Ny votoatin'ny paradokao, mifandraika amin'ny horonan-tsary azo jerena sy tsy azo ovaina, dia izao manaraka izao: raha mamadika ny solosaina ianao (anisan'izany ny fomba hiakarana hiandrasana) dia tsy maintsy mamaky ny rakitra ao anaty rakitra ianao. Izany dia mitaky mpamily rafitra iray. Saingy ilay mpamily fitantanana ny rakitra dia eo amin'ilay horonam-peo izay tokony hovakiana.
Mba hialana amin'ny toe-javatra, dia mpamily kely manokana no ampiasaina izay afaka mahita ny antotan-drakitra ilaina amin'ny fametrahana ny fototry ny rafitra (sy amin'io toerana io ihany) ary mameno azy ireo ho fahatsiarovana ary aorian'izay dia feno ilay mpamorona sarimihetsika feno tanteraka izay afaka miara-miasa fizarana hafa. Raha toa ka misy ny hibernation dia ampiasaina io rakitra kely io mba hamehezana ny votoatin'ny hiberfil.sys, izay efa nakarin'ilay mpizara ny solosaina.